Ahlusuna oo dhaliilay duqayntii ciidamada Kenya ay shalay ka fuliyeen Jilib. – Radio Daljir
Ahlusuna oo dhaliilay duqayntii ciidamada Kenya ay shalay ka fuliyeen Jilib.
Gedo,, Jan 16 ?Ciidamada dawladda Kenya ayaa maalintii shalay duqayn ay ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka J/Hoose waxaa ay ku laayeen 5-qof oo badankoodu ay yihiin carruur ,kuwaas oo ay duqeyntooda saamaysay hoyga ay ka daganaayeen Jilib.
Shiikh Isxaaq Xasan Xuseen oo ah xoghayaha gaashaandhiga gobolka Geddo ee Ahlusunah Waljamaaca ayaa cambaareeyay weerakii ay kusoo qaadeen ciidamada Kenya degmada Jilib ee gobolka J/Hoose,waxaana uu sheegay inay ahayd duqeyn aan go’aan wanaagsan laga gaarin meesha lala beegsanaayo.
Shiikh Isxaaq Xasan Xuseen ayaa waxaa uu u tacsiyeeyay dadkii ay saamaynta ku yeelatay duqeyntii shalay,taas oo uu sheegay inay ahayd mid naxdin huwan.
Xogahayha gaashaandhiga Ahlu-sunah waljamaaca ee Koonfurta Soomaaliya waxaa uu sheegay inay ugu baaqayaan dadku inay la shaqeeyaan ciidamadooda iyo kuwa dawladda ee dagaalka kula jira ururka Al-Shabaab.
Ciidamada isgarabsanaya ee dawladda kenya iyo ciidamada dawladda KMG ah ayaa dagaalo kawada gobolada J/Hoose iyo Gedo,kaas oo ay kula jiraan ciidamada ururka Al-shabaab